हचुवामै बाँडियो ‘किसान’ परिचय पत्र – Newsagro.com :
हचुवामै बाँडियो ‘किसान’ परिचय पत्र
May 16, 2016 May 18, 2016 NewsAgro0Comments Agriculture Online newsagro.com न्युज एग्रो डट कम, Baglung, Banke, bara, Dadeldhura, Dhankutta, Farmer Identity Card, kathmandu, Kishan Identiry Card किसान परिचय पत्र, Moad कृषि विकास मन्त्रालय Ministry of Agriculture Development of Nepal, Nepal, ‎NFGF‬ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, Uddhav Adhikari उद्धव अधिकारी
यो समाचार 469 पटक पढिएको
काठमाडौं / सरकारी सेवा सुविधा प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बितरण गर्न सुरु गरेको किसान परिचय पत्र हचुवाको भरमा बितरण गरिएको छ । किसान र गैर किसान वर्गीकरण गरेर परिचय पत्र बितरण गर्नुपर्नेमा परिचय पत्र प्राप्त गर्नेहरु अधिकाँश पहुँचवाला र ठूलो परिमाणमा जग्गा जमिन भएका सम्पन्न व्यक्तिहरु परेका छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्ष २०७१।०७२ देखि सुरु गरेको किसान परिचय पत्र किसानको वर्गीकरण बिना नै आफुखुशी बितरण गरिएको छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्षमा पाँच विकास केन्द्रका एक–एक गरी पाँच वटा जिल्लामा किसान परिचय पत्र बितरण गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । जसअनुसार बाँके, बागलु, बारा, धनकुट्टा र डडेलधुरा जिल्लाका किसानलाई परिचय पत्र बितरण गर्ने योजना थियो ।
पाँच जिल्लाका ५१ हजार नौं सय ८५ जना किसानलाई सरकारी सेवा सुविधा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराउन परिचय पत्र बितरण गर्ने मन्त्रालयले योजना अघि बढाएको थियो । मन्त्रालयले परिचयपत्रमार्फत खाद्य सुरक्षा कायम राख्न मल, कृषि उपकरण, बैंकसम्बन्धि ऋण, वीउ, पशु तथा दूधजन्य, बोटविरुवा, सिंचाईलगायतका क्षेत्रगत बिषयमा अनुदान तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने दावी गरेको थियो ।
परिचयपत्रमार्फत एक बर्षमा तीन वालीका लागि आवश्यक सुविधा तथा अनुदान किसानलाई उपलब्ध गराउने सरकारको नीति थियो । तर सरकारले पहुँचको भरमा किसानको वर्गीकरण बिना नै अत्यन्त न्युन संख्यामा परिचय पत्र बितरण गरेको छ । परिचय पत्र प्राप्त गरेका किसानले पनि हालसम्म मन्त्रालय आफैले घोषणा गरेको सेवा सुविधा पनि प्राप्त गरेका छैंनन् । किसान परिचय पत्र किसानका लागि निल्नु न ओकल्नुजस्तै बनेको छ ।
किसानको वर्गीकरण बिना बितरण गरिएको परिचय पत्रका कारण गरिब,
सिमान्तकृत र साना किसान सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले परिचय पत्र बितरणसम्बन्धमा गरेको स्थलगत अध्ययनको क्रममा हचुवाको भरमा किसानलाई परिचय पत्र बितरण गरिएको पाइएको छ । महासंघले पाँच जिल्लामा राष्ट्रि भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र केएर नेपालको सहकार्यमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महासंघले सबै खालका किसानलाई एउटै समूहमा सूचीकृत गरी मन्त्रालयले लक्ष्यभन्दा अत्यन्त न्युन संख्यामा उक्त परिचय पत्र वितरण गरेको उल्लेख गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा किसानको हैसियतको आधारमा परिचय पत्र बितरण गर्नुपर्नेमा हुने र नहुने सबैलाई समान खालको परिचयपत्र बितरण गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययनअनुसार बाँकेमा १० हजार सात सय, बाग्लु®मा १५ हजार, बारामा ११ हजार सात सय, धनकुट्टामा सात हजार नौं सय र डडेलधुरामा ६ हजार ६ सय ८५ जना किसानलाई परिचय पत्र बितरण गर्ने योजना थियो । जसमध्ये धनकुट्टामा एकजनालाई पनि बितरण गरिएको छैंन् भने बाँकेमा नौं सय ७३, बाग्लु®मा नौं हजार आठ सय, बारामा ६ हजार ६१ र डडेलधुरामा तीन सय ८१ जनालाई मात्र बितरण गरिएको छ । पाँच जिल्लामा किसानको संख्या झण्डै सात लाख ८८ हजार नौं सय ६९ छ । लक्ष्य संख्यामध्ये एक तिहाईको संख्यामा मात्रै पहुँचको भरमा परिचय पत्र बितरण गरिएको छ ।
‘परिचय बितरण हुने जिल्लाका सबै किसानलाई पनि परिचय पत्रको बारेमा सूचना नपुगेको जानकारी पाइयो’, महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सोमबार भने,‘हचुवाको भरमा परिचय पत्र बितरण गरिएको फेला प¥यो ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका तत्कालिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगतवहादुर बस्नेतले किसान र गैर किसानलाई छुट्टयाएर परिचय पत्र बितरण गर्नुपर्ने अध्ययनको क्रममा सुझाव दिएका छन् । उनले भने,‘सम्पन्न र विपन्न किसानलाई एउटै समूहमा राखेर एकै नाशको परिचय पत्र वितरण गर्नुको औचित्य छैंन ।’ उनकाअनुसार किसानको वर्गीकरण बिना बितरण गरिएको परिचय पत्रका कारण गरिब, सिमान्तकृत र साना किसान सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् ।
मन्त्रालयले परिचय पत्र वितरणका लागि नागरिकताको प्रतिलिपी, जग्गाधनीको पुर्जा, स्थानीय निकायको सिफारिश र करारमा जग्गा लिएर खेती गरेको भएका करारनामासम्बन्धी प्रमाण किसानबाट माग गरेको थियो । ‘अहिले स्थानीय निकायको तल्लो तहमा जनप्रतिनिधी विहिन भएको अवस्थामा भएका सचिब पनि सदरमुकाम केन्द्रित छन्’, कृषि बिज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले भने,‘किसान परिचय पत्रका लागि पहिलो गाँसमा ढु®ा यहीनेर लाग्यो । साना र भूमिहिन किसानको बाहुल्यता रहेको किसानसँग जग्गाको प्रमाण पत्र छैंन् ।’ मन्त्रालयले यस्तो अवस्थामा अपारदर्शी रुपमा परिचय पत्र बितरण गरेको उनको ठहर छ ।
स्थलगत अध्ययन पश्चात् किसानलाई चार वर्गीकरणमा बाँडेर परिचय पत्र वितरण गर्न सुझाव दिइएको छ । जसअनुसार भूमिहिन–विपन्न, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसैगरी पाँच हेक्टरभन्दा बढी जग्गा हुनेलाई किसानभन्दा उद्योगीको रुपमा छुट्टै राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिब डा. सुरज पोखरेलले तत्कालिन परिवेशमा आएको किसान परिचय पत्रसम्बन्धी निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी वर्गीकरणको आधारमा परिचय पत्र बितरण गरिने जानकारी दिए । उनकाअनुसार किसानको हैसियतको आधारमा वर्गीकरण गरेर आगामी दिनमा पारदर्शी रुपमा परिचय पत्र प्रदान गर्न आवश्यक गृहकार्य सुरु भएको बताए ।
← च्याउको पेटेन्ट राइटको लागि प्रस्ताव
पानी उद्योगमाथि कारवाही सुरु →
यो समाचार 35111 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 34724 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 26039 पटक पढिएको GM Food Crops Illegally Growing in India • By Colin Todhunter The GM Contamination Register database is run
यो समाचार 6783 पटक पढिएकोम्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । जिल्लाका किसान यान्त्रिक हलोतर्फ आकर्षित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले